Usoro a sitere na Gameloft na Siege | Gam akporosis
Siege, nke ohuru site na Gameloft maka Nsogbu nke usoro nke Clans
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Anyị ezutela n'oge na-adịbeghị anya ihe ịtụnanya na-akpata Nsogbu Nsogbu nke ezinụlọ na-achịkọta kpukpru usen emi ẹbede. Dika o nwere nne okuko nke dinyere akwa ola edo n'aka ya, enwere ọtụtụ ọmụmụ na ụlọ ọrụ na igba egbe yiri egwuregwu, ọ bụ ezie na iji isiokwu dị iche iche, nke ahụ na-anwa ibuso ma zuo ohi ya. Ma eziokwu bụ na Nsogbu nke Clans na-aga n'ihu na-agagharị na-achịkwa ụdị a nke videogames ebe ịkwesịrị inwe ihe ọmụma gbasara atụmatụ, ntọala ụlọ ma ọ bụrụ na ị nwere ntakịrị akụ na ụba n'ụdị euro, ọ ka mma.
Siege bụ egwuregwu ọhụrụ nke Gameloft dị na Storelọ Ahịa Play iji gbalịa ịma aha Supercell. Egwuregwu vidio nke dọtara uche ndị na-ege ntị mgbe e gosipụtara ya na E3 2015 na-adịbeghị anya n'ihi eserese ya dị elu na ọnọdụ mkpọsa ogologo. Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ izu ohi nke na-etinye akwa ọlaedo site na Supercell, ị ga-ewepụta ihe na-eme ka ọ ghara imeri, ma anyị nwere ike ihu otu n'ime mbọ kachasị nso na nke a na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
1 Gameloft nnọchibido
2 Ahụkebe nka pụrụ iche
3 Uche ederede
4 Budata ngwa
Ọ bụrụ na ejiji ma ọ bụ ọnọdụ nwere ihe ọ bụla, ọ bụ iji malite nzọ dị iche iche mana ha nwere ọtụtụ myirịta. Nke a Anyị nwere ike ikwu ya banyere mbịaghachi nke PC na ndị MOBA ndị ahụ na-enye ha niile na otu nke anyị hụrụ Njikọ nke Akụkọ Ifo, DOTA ma ọ bụ ọhụrụ Blizzard Heroes of Storm nke a na-eju ndị bi na ndị bịara abịa anya.
Otu ihe ahụ na-eme na egwuregwu vidio maka ngwaọrụ mkpanaka dịka Nsogbu nke Clans na nke ahụ Ha dabere na ịtọ ntọala iji wuo ya, bulie ya n'ọdịdị ma malitezie ya na ndị agha ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị agha ga-eche ndị egwuregwu dị iche iche n'akụkụ ụwa niile.
Ebumnobi na Siege ma ọ bụ Siegefall, bụ were akara nke ngwa agha gị nke ndị agha pụrụ iche iji nwaa merie mpaghara niile nke maapụ ahụ. Ndị agha gị nwere ọgba aghara, trolls, knights, na ọbụna a dike, onye bụ isi a ibu onye nwere ike karịa ndị ọzọ na gị agha. Ọtụtụ myirịta na egwuregwu ndị ọzọ dịka nke a kpọtụrụ aha.
Ahụkebe nka pụrụ iche
Anyị agaghị agha naanị mpaghara ndị ọzọ, ma anyị ga-enwe ọrụ dị iche iche ichebe ala-eze nke anyị mgbe anyị na-ewu mines, osisi na ugbo iji mee ka ndị agha anyị sie ike ma na-aga n'ihu na-agbanwe ntọala anyị.
Otu n'ime nhọrọ ndị ọzọ karịa ndị ọzọ na ụdị bụ kaadị anwansi ndị ga-enye anyị ike pụrụ iche ịmalite nkume ọkụ na-ebibi ihe, ifriizi ndị iro ma ọ bụ kpọọ oku nke dragọn ahụ. Na Nsogbu nke agbụrụ anyị nwere nhọrọ ndị yiri nke kaadị ndị a na-enye na ọgwụ, yabụ anyị hụrụ etu ntụnyere ahụ siri doo anya.
Ọ bụrụ na ihe nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti Siege, ọ bụ ihe ngosi ya dị egwu na ezigbo ọrụ nke Gameloft, otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma nke na-ebuputa ọtụtụ egwuregwu vidiyo maka ngwaọrụ mkpanaka. Maka ndị ọzọ, ọ bụrụ na ejiri ụdị egwuregwu a mara gị, ọ gaghị ewe oge iji jide Siege ọhụrụ a. Enwere ya site na Storelọ Ahịa Play na micropayments na-eche ka enwetara ya ịbụ onye kachasị ike na ụwa.
Nyochaa: Manuel Ramirez
Onye edemede: 65%
Ihe ngosi ya di egwu / li>
Ọzọ nke ụdị a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Siege, nke ohuru site na Gameloft maka Nsogbu nke usoro nke Clans
Sọpụrụ 4X, nyocha nke ọhụụ ọhụrụ Huawei
[APK] Ngwa niile nke Asus Zenfone 2 (3): Njikwa faili na Asus Email nke Asus Zenfone 2